Vanyoresa YouTube Vanyori | Free YouTube Anofarira
Tenga Package Deal
Tenga Tsika YouTube Graphic
Yemahara YouTube Vanyoreri & Mahara YouTube Anofarira
Simbisa Yako YouTube Chiteshi Kukura Nhasi!
Yedu yakapusa network inokutendera iwe kuti uwane vanyoreri veYouTube uye zvavanofarira kuchiteshi chako. Yakanakisa yakabhadharwa sarudzo dzekusaomera kukura dziripo zvakare.
Wana Mahara YouTube Vanyoreri or Tenga YouTube Vanyori
Tevedza nhanho idzi dzakareruka uye wedzera kukura kweYouTube chiteshi mumaminetsi!
Step 2. Shandisa Chirongwa
Step 3. Wedzera Chiteshi Chako
Kana iwe usina hanya kutora maminetsi mashoma zuva rega rega kuti uite chirongwa, isu tinopa zvakanakisa sarudzo dzinoendesa kune gumi mahara vanyori uye makumi maviri emahara YouTube anoda pazuva.
YouTubers senge iwe urikushandisa iyi sevhisi sevhisi kuti uwane vanyoreri kumashure nekudzoka pakati pevamwe maTubers.
Basa reSoNuker rakachengeteka uye rakachengeteka! YouTube chiteshi haapihwe chirango chekushandisa sevhisi yedu uye isu tinoshanda nekuvanzika, chengetedzo uye zvakavanzika zvakavanzika.
Kana iwe uchida kushanda nesimba uye otomatiki kuwana vanyoreri veYouTube uye vhidhiyo inofarira zuva rega rega, saka tinokurudzira chirongwa chakabhadharwa chekugamuchira zero-kuyedza, kukura kwemazuva ese!
Netiweki yedu yakagadzirirwa kuve yakanyanyisa kukosha uye yakapusa kuti munhu wese ashandise. Bhalisa account, login uye zvimwe zvese zvinotsanangudza!
Yedu inoshamwaridza rutsigiro timu iri pano kuti ibatsire! Une mubvunzo, chirevo, kana kunetsekana? Tiri nyore email ipapo uye tinopindura kumubvunzo wega wega mukati maawa 24-72.
Ini Ndiri Kuda Mahara Vanyoreri & Vanofarira Izvozvi!
Nei Uchishandisa SoNuker?
SoNuker inopa inovandudza network iyo inokutendera iwe kukurumidza uye nyore kugamuchira 10 mahara YouTube Vanyoreri uye 10 yemahara YouTube Anofarira maawa gumi nemaviri! Zvirongwa zvakabhadharwa zviripo, asi zvirongwa zvemahara zvichiri kushanda zvakanyanya mukukudza chiteshi chako. Iwe haufanire kupinda muakaundi yako yeYouTube kuti uwane webhusaiti yedu, kuchengetedza ruzivo rweYouTube chiteshi rwakachengeteka uye rwakachengeteka.
SoNuker yakagadzirirwa kuve yakapusa sezvinobvira sevanhu! Nguva yako yakakosha uye tinozvinzwisisa. Kuti ugamuchire vakasununguka YouTube vanyoreri uye zvavanofarira, ingoita senge uye kunyorera kune mamwe makumi maviri mageji. Iwe uchawana vako vanonyoresa mukati meawa gumi nemaviri uye unogona kudzokorora maitiro aya maawa gumi nemaviri ekuenderera mberi kukura.
Paunoshandisa chirongwa chemahara kana chakabhadharwa, iwe uchaona vako vanyoreri vatanga kuwedzera ipapo ipapo. Nemaoko gadzira chirongwa chemahara maawa gumi nemaviri, kana kumisikidza 12% otomatiki akabhadharwa chirongwa. Shandisa chirongwa chakabhadharwa uye gamuchira wega vanyori zuva rega rega!
YouTube Zvirongwa zvekukura
Wana Vanyoreri gumi mumaawa gumi nemaviri
Iwe Nyorera & Unoda Mavhidhiyo makumi maviri
Iwe Nemaitiro Activate Chirongwa
Anonyoresa Kuverenga Anofanira Kuve Veruzhinji
Inofanirwa Kuva Nemavhidhiyo 1+ Akanyorwa
Rega Kushandisa Panguva Ino Yese!
Tora 10-15 Vanyoreri Mazuva ese!
Inozvishandura Zuva Nezuva
Cancel Panguva Yese!
Tora 20-30 Vanyoreri Mazuva ese!
Tora 40-60 Vanyoreri Mazuva ese!
Zvikanganiso zvekudzivisa Paunenge Uchida More Mahara YouTube Vanyoreri
Iwe uri YouTuber uyo anoda kukura chiteshi chavo nekukurumidza? Nemazana eYouTube chiteshi ari kutanga zuva rega rega, kumira kunze paYouTube iko zvino kwakaoma kupfuura nakare kose. Unogona kushanda zvakaomarara pane zvako zvemukati, wobva waona kuti maonero ako anoramba kuyambuka manhamba mana manhamba. Pane chikuva apo vanhu vanowana mamirioni emaonero uye nyaya dzebudiriro dzakatenderedza kona yega yega, unova sei mumwe weaya mabudiriro?
Kuva neboka rakazvipira revanyori veYouTube zvinogona kunge zviri izvo zvaunoda kana iwe ukazviwana uchinzwa kuora mwoyo nekukura kunonoka kwechiteshi chako. Pasina vanyori vemahara, uye nezvakanaka zvemukati, iwe unogona achiri kutarisira kuti chiteshi chako chinogona kukura nekufamba kwenguva. Izvo zvinowanzoitika, asi zvakare hazviitike kune vanhu vazhinji. Apa ndipo panonyoreswa mahara uye mahara zvekuda zvinogona kupa chiteshi chako kuratidzwa kwainoda.
Nei Kuwana Mahara YouTube Vanyoreri?
Nzira huru yekupa yako YouTube chiteshi kurwisa kwekutanga ndeye nerubatsiro rwevanyori veYouTube. Pakupedzisira, huwandu hwevanonyorera chiteshi chako chine, chine chirevo chakakura pakubudirira kwaunoita pachikuva. Inogona kukurudzira vatapi chaivo veYouTube kuti vanyore kuchiteshi chako futi. Paunenge waita nemazvo, vanyori vako veYouTube vanogona kukugonesa kuyera yako YouTube chiteshi nekukurumidza kupfuura zvawaitarisira.
Kana munhu angangonyoresa kuYouTube akasangana nevhidhiyo, vanomira kuti vatarise kufarira uye maonero evhidhiyo yako. Ivo vanotarisawo kuwanda kwevanonyoresa chiteshi chako chine. Kana chiteshi chako chichiita kunge chine vamwe vanyoreri, izvi zvinogona kupa chitarisiko chekuti uri mumwe munhu anoteverwa nekutendwa nevanhu vazhinji. Iyi ndiyo tendeuka, inokoka vanyoreri veYouTube chaiwo kuti vade mavhidhiyo ako uye vanyorese kune zvako zvemukati.
Kiyi yekubudirira kushandisa vanyoreri veYouTube kuyera yako YouTube chiteshi ndeyekugara uchikura chiteshi chako pane yakatarwa nguva. Kana vanhu vakaona kuti iwe wakangoerekana wawana zviuru zana vateveri nehusiku, saka izvi zvinogona kuita sekufungidzira. Kana izvi zvikaitika, unogona kutarisira kuti vamwe vanhu vadzvinyirire kuburikidza nezvako zvemukati kuti vanzwisise kuti sei iwe wakawana vazhinji vanyorese nekukurumidza. Kana iwe usina chero hutachiona zvidimbu zvemukati izvo zvinogona kutsanangura iko kukura, ivo vanogona kunzwisisa kuti vanyori havana chokwadi.
Panzvimbo iyoyo, iwe unogona kutambanudza vako vemahara vanyori veYouTube kuti vasvike iyo imwechete nhamba, pasina iyo inomutsa chero fungidziro. SoNuker ipuratifomu iyo inokutendera iwe kuti uite chaizvo izvo. Nekukura kwakadzikama kwevateveri vanosvika gumi kusvika makumi maviri zuva rega rega, unogona kutarisira kuona kukwira kusingachinjike kune vako vanyori veYouTube kuverenga. Iko kumhanya pane izvi kunoitika, kunyangwe kuchipararira kwenguva, kuchiri kukurumidza kukurumidza kana ichienzaniswa kuyera chiteshi chako zvakasikwa.
Chikonzero shure kweichi ndechekuti vanhu vatove nezvakanaka zvemhando yepamusoro zvemukati kubva kune akakurumbira YouTube chiteshi kuti vafarire. Saka kana iwe uchida kukwevera ngwariro yavo kure newe, nzira inoshanda yekuzadzisa izvi ndeyekunyepedzera kuti iwe unotova nehanya iwe waunoda. Chaizvoizvo, ndeyenhema iyo kusvikira iwe waigadzira simba, kunze kwekunge ichishanda kuunza vanyori vatsva veYouTube, maonero uye zvavanofarira kuchiteshi chako.
Kunyangwe kuwana vazhinji vanyoreri veYouTube nekukurumidza zvakanyanya iko kukanganisa kukuru kunowanzoitwa nevanhu vazhinji, handiyo yega. Hezvino zvese zvaunofanirwa kuziva nezve zvikanganiso zvaunofanira kudzivirira kana uchiwana vanyori veYouTube, uye nei.
1. Hapana Kubatanidzwa Kubva Kune Vanyoresa
Chiteshi chine mamirioni ekunyoresa asi pasina zvirevo kana kufarira mavhidhiyo mazhinji, uye pamwe mazana emazana ekuona pamavhidhiyo mazhinji anotaridzika sehove, handiti? Paunenge uchitsvaga vanyoreri veYouTube, iwe unofanirwa zvakare kuchengetedza huwandu pakati pevanyori, zvavanofarira, zvirevo uye maonero.
Ipo makomendi uye zvavanofarira zvichisiyana pakati pemavhidhiyo, vanofanirwa kuratidza maitiro. Izvi zvinowanzouya nenzira yekuona avhareji nhamba yemashoko muvhidhiyo yega yega. Yako yekutarisa kuverenga inogara yakakwira kupfuura iyo nhamba yekufarira uye makomendi ako mavhidhiyo anowana. Huwandu hwekufarira mavhidhiyo ako hunowanzo kuve hwakakwira kupfuura huwandu hwemashoko. Sezvineiwo, iwe unofanirwa kuve nezvinodiwa zvakanyanya pane zvausingade pavhidhiyo yako. Zvakawandisa zvisingafadzi zvinogona kuratidza zvakashata uye kudzora vataridzi veYouTube kubva kunyorera kuchiteshi chako.
NaSoNuker, unogona kuwana kwete vanyori veYouTube chete, asi zvakare YouTube yaunoda. Izvi zvinokubatsira iwe kuti urambe uchienzanisa pakati pezvaunofarira uye zvaunofarira zvaunoda, kupa chimiro chebudiriro uye nekukurumidza-kuyera chiteshi.
2. Enzanisa Zvaunotarisira
Chimwe chinhu chaunofunga kufunga nezvacho kunzwisisa zvauri kutarisira kubva kune vako vanyori veYouTube. Kana iwe uchivatarisira kuti vaite sevanyori chaivo, saka unogona kusuwa. Vanyori vakasununguka veYouTube vanogona kuuya nenzira mbiri.
Yekutanga yeiyi mabhoti. Idzi ndidzo nzira dzeYouTube dzakagadzirwa nechinangwa chaicho chekuvaka iyo yekunyoresa kuverenga yematanho eYouTube. Ivo vanowanzo kunge vasina kana maficha maficha, kana iri pachena stock mufananidzo. Vazhinji vanowanzo siya kumashure spam zvirevo pamavhidhiyo ako. Izvi zvinogona kuve nenjodzi, sezvo ichigona kudzivisa pakarepo vanhu vazhinji kubva kunyorera kuchiteshi chako. YouTube zvakare ine yakaoma mutemo unopesana nemaakaundi akadaro. Saka kunyangwe iwe uchida vanyori veYouTube, dzivisa mapuratifomu anovapa kuburikidza nemabhoti.
Imwe sarudzo ndeyekudyidzana zvakananga nevamwe veYouTube vagadziri vezvinhu vari kutsvaga kuyera uye kukura chiteshi chavo nenzira imwecheteyo yauri. Vanyoreri veYouTube iwe vaunowana vanogona kubatana zvakanyanya nechiteshi chako, asi iwo maakaunzi echokwadi. Vazhinji vachakusiirawo YouTube zvavanoda kana ukavaitirawo izvozvo.
Nekufamba kwenguva, kuwedzerwa kwevanyori vakadai veYouTube kunogona kugonesa chiteshi chako kuwana mukana waunoda. Izvi zvakaita seYouTube algorithm inotanga kuona kuti maakaundi akasiyana echokwadi ari kunyorera kuchiteshi chako uye kufarira mavhidhiyo ako.
Kana iwe uchinetseka nezvekuve nenhamba yakaderera yemashoko pane ako mavhidhiyo zvakare, saka funga kukumbira vako YouTube vanyoreri rubatsiro. Pane chikuva chakafanana neSoNuker, unogona kushanda pamwe nevamwe vagadziri veYouTube zvemukati kusimudzira kukura kwechiteshi chako cheYouTube. Kana zvasvika pakutsinhana kwakadai, iwe unofanirwa zvakare kufunga kuti newewo unotarisirwa kubatsira vamwe vanogadzira zvemukati zvakare.
3. Izvo Vanyori veYouTube Vanogona Kukuitira Iwe
Kunze kwekunge iwe uchida kuvaka chiteshi chako nekuvimba chete nevanyori veYouTube, mikana ndeyekuti iwe uchazoda chaiyo vanyoreri veYouTube kune chiteshi chako. Pfungwa yekushandisa vanyoreri veYouTube inofanirwa kunge iri yekushandisa nhamba kusimudzira kukura kwechiteshi chako. Iyi inguva inokwezva vechokwadi vevanyori veYouTube vanozoita kubva pairi, vanobatana nezvako zvemukati.
Zvese zvauri kuita kana iwe wawana vanyoreri veYouTube, kuyedza kuwedzera kuburitswa izvo zvemukati zvaunowana papuratifomu. Iyo YouTube algorithm haigone kusimudzira zvirimo kunze kwekunge yawana nharaunda inofarira zvemukati mako. Uye sezvo paine vanozivikanwa zvemukati vagadziri mune ingangoita yega niche paYouTube, izvi zvinoisa vatsva vezvigadzirwa pakaipa.
Kana iwe uri mumwe munhu akambove neYouTube chiteshi kwekanguva asi wawana budiriro diki mukuunza maonero nemaitiro. Ipapo iwe unogona zvakare kubatsirwa nekuwana vanyori veYouTube. Kana iwe ukaona kuti hausi kuwana vamwezve vaoni, ipapo mikana ndeyekuti vhidhiyo yako haisi kukurudzirwa kune chero munhu uye haisi kuwana mukana wakakwana. Vashoma vanyoreri veYouTube zuva rega rega pane yakatarwa nguva yenguva vanogona kuwana iyo algorithm yekufunga kuti zvemukati zvirikuwana kuratidzwa, uye nekudaro zvinoda kukwidziridzwa.
4. Vaka Kutapura Kwako
Kubudirira paYouTube pakupedzisira kunouya kune mhando yezvako zvemukati. Unogona kuve nemamirioni evanyori veYouTube, asi pasina zvemhando yepamusoro zvemukati, haugone kuwana traction yaunoda kubva kune vanoona chaiko. Uye sezvo vataridzi chaivo uye kukura kwakadzikama kuri izvo zvinogona kukugonesa iwe kusvika pamatanho epuratifomu, inzira yakanaka yekuita kuti kukurumidza kuenda kuchiteshi chako.
Paunenge iwe uchinge wagadzira imwe huwandu hwekuratidzira uye hwekumanikidza pane chiteshi. monetize zvemukati zvako uye kunyange kubatana neYouTube. Kuwana iko kwekutanga kusimudzira ndiko kunogona kupatsanura yako YouTube chiteshi kubva kukundikana uye kubudirira. Uye apa ndipo panogona kunyoreswa maYouTube vanyori.
Panguva imwecheteyo, haufanire kuve wakanyanya kuvimba nevanyori veYouTube, asi asi shandisa rubatsiro rwavo kukurudzira kubudirira kwako.
5. Usakanganwa Nezve Zviri Mukati
Zvemukati zvaunogadzira ndizvo zvinokubatsira iwe kuvaka inogara chiteshi paYouTube. Kutarisa pane zvako zvemukati, uye kushandisa vanyori veYouTube padivi nepadivi kuti vakure izvo zvinoonekwa zvemukati zvinogona kukumisikidza kuti ubudirire. Iwe unofanirwa kugara uchitsvaga iwo muganho, kumashure uko iko chaiko maonero, vanyoreri uye zvavanofarira zvinotevera.
Zvisinei, vazhinji vanogadzira zvemukati vanowanzo kanganwa kugadzira zvakanaka zvemukati. Pane kudaro, vanovimba nenhamba dzevanyori veYouTube uye YouTube inoda kuvapa iwo maitiro ekubudirira. Kana izvi zvikaitika, zvinogona kuve pachena kune vataridzi chaivo vashandisi vepuratifomu kuti kuoneka kwako kunobva kune vekunyoresa mahara uye zvavanofarira. Kana izvi zvikaitika, vazhinji vangangove vanyoreri vanogona kunetseka nekuita nezvako zvirimo.
Kana iwe uine zvemhando yepamusoro zvemukati zvakadaro, unogona kubudirira kuwedzera nhamba dzaunowana kuburikidza nevanyori vako veYouTube uye zvavanoda, kukura kuchiteshi chako.
6. Kwete Kushandisa Dzimwe Nzira Kukura Chiteshi Chako
Nepo vanyoreri veYouTube uye YouTube zvavanoda zvichikubatsira iwe kukura chiteshi chako, handiyo chete sarudzo yaunogona kuwana. Kunyangwe iri imwe yedzakanakisa nzira dzekukudza yako YouTube chiteshi, iwe uchawana kubudirira kwakawanda kana iwe uchiishandisa pamwe nemamwe marongero.
Saka kana iwe uri kutowana vanyoreri veYouTube, iwe unogona zvakare kushandisa marongero senge kupaaways, makwikwi uye makuponi kuti uwane vamwe chaivo vanyori vechiteshi chako. Pamwe chete nekukwevera kutarisa kwevangangonyoresa kuchiteshi chako, iwe zvakare unodawo kuchengetedza kwavo. Izvi zvinowedzera mikana yekuti vanyore kuchiteshi chako.
Uchishandisa kupaaways, kutenda vanhu nekubatsira chiteshi chako kukura, uye kutsvaga dzimwe nzira dzekuita nevatariri vako kunogona kugonesa kukura nekukurumidza kwechiteshi chako.
Inguva Yakareba Sei Iwe Unofanira Kuramba Uchiwana Mahara YouTube Vanyoreri Kukura Chako Chiteshi?
Paunotanga kuendesa vanyori vako veYouTube kuchiteshi chako, unogona kunzwa kufara kuti kukurumidza kuri kuenda kuchiteshi chako. Saka ngatitii mwedzi unopfuura uye chiteshi chako chiri kukura zvirinani kupfuura zvawaitarisira. Ino inguva chaiyo yekumira kuwana rubatsiro kubva kunyoreri veYouTube.
Mhinduro chaiyo ndeyokuti unofanira kugara kwenguva yakareba sei uchivimba nevanyori veYouTube uye YouTube zvaunoda zvinoenderana nezvinhu zvakasiyana.
Zviri mukati mako mune yakakurumbira niche, uye inogona kukwezva akakwana maonero ega ega izvozvi?
Kana zvirimo zvako zviri mune inozivikanwa niche, une chivimbo here kuti iwe unogona kudhonza mapoka kubva kune vanozivikanwa vezvigadzirwa zvemukati mune yako niche?
Kana zvirimo zvako zviri mune isingazivikanwe niche, saka zvakadii kuteedzera kuri mukati kwako zviri kuwanikwa kubva kune chaivo vanoona?
Iwe unonzwa uine chivimbo chakaringana here kuti iwe unogona kuramba uchikura chiteshi chako cheYouTube pasina rubatsiro rwevanyoreri veYouTube.
Zviitiko zvemunhu mumwe nemumwe zvine mukana wekutaura kuti inguvai yaunofanirwa kuramba uchivimba nevanyori veYouTube. Nekudaro, kunyangwe zvirimo zvako zvichiri kuda kukwidziridzwa kuti uwane traction chinhu chakatemerwa futi.
Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kuvimba uye wosarudza kumira kuvimba nevanyori veYouTube chero paunoda. Iwe unogona zvakare kubvunza kune vanyori veYouTube gare gare, kana iwe uchizoida iyo.
NaSoNuker, unogona kushanduka kuvimba nevanhu vemahara YouTube vanyoreri. Ona nhamba dzako dzichikwira kwemwedzi, uyezve kana uchifunga kuti iwe unogona kuramba uchikura chiteshi chako wega, saka zvakanaka! Dzimwe nguva, vanhu vanoshandisa vanyoreri veYouTube uye YouTube vanofarira kune zvakanangwa zvekusimudzira imwe, kana mashoma mavhidhiyo.
Iwe zvaunoda kuratidzwa uye nemashandisiro aungaita YouTube vanyoreri kukura chiteshi chako zvinoenderana newe. Nekudaro, kana iwe ukambozviwana iwe uchida rubatsiro rwevanyori veYouTube uye YouTube zvaunoda, ipapo unogona kugara uchivimba neSoNuker kuti ikubatsire.
Nei Vanhu Vachisarudza Mahara YouTube Vanyoreri?
Nzira yekubudirira inogona kuoma, uye muYouTube, kuoma kwacho kunowedzerwa nemakwikwi. Vanhu vanowanzovimba nevanyori veYouTube senzira yekukwirisa nhandare yekutamba, kunyanya kana vari vatsva vezvigadzirwa.
Izvi zvakaita sekucherechedzwa papuratifomu seYouTube zvinogona kunge zvakaoma. Nekudaro, kana iwe uchinge waonekwa uye iyo YouTube algorithm inotanga kukurudzira uye kukurudzira ako mavhidhiyo, kubudirira kunogona kutevera zvakasununguka. Uye kuburikidza neSoNuker, unogona kuwana vateveri vechokwadi vaunogona kubatsirawo pakutendeuka.
Nokusarudza kwete kungosarudza mahara YouTube vanyoreri, iwe unogona zvakare kudzora kubudirira kwako kune imwe nhanho. Funga nezvekuvaka zvinotarisirwa nezvekuti vanyori veYouTube vangakubatsira sei kukudza chiteshi chako. Nenzira iyoyo, iwe unogona kuzviwana iwe uchikura uye uchikura nekukurumidza kupfuura zvawaimbofungidzira.
Vateveri veYouTube chaivo uye zvinowirirana neYouTube zvinoda kukubatsira kumisikidza chiteshi chako kuti ubudirire. Panzvimbo pekumirira YouTube algorithm kuti uone zvirimo, wadii kukoka iko kuburitswa mukati mako.
Kushandisa vanyori veYouTube zvishoma nezvishoma, sekuwana vanyoreri gumi kusvika makumi maviri pazuva kunogona kubatsira kuti chiteshi chako chikure. Izvi zvinopa pfungwa yekukura chaiko, uye zvinogona kukurudzira vataridzi chaivo kunyorera kuchiteshi chako.
Panguva imwecheteyo, iwe haugone kukanganwa nezve kuwana zvavanofarira mumavhidhiyo ako futi. Anofarira uye makomendi anoratidza kubatanidzwa kwechiteshi chako, uye zvirinyore zviratidzo zvekukura. Kana ako mavhidhiyo asingakwanise kuwana zvaunoda iwe, saka YouTube dzinoda dzinogona kugadzirisa dambudziko kwauri.
Paunoshandisa iyo SoNuker chikuva kuti uwane vanyoreri veYouTube, haufanire kunetseka nezve bots kana spam mhinduro dzinogara dzichionekwa pamavhidhiyo ako. Pane kudaro, iwe unogona kuvimba nevako vanyoreri veYouTube kuti vakupe iwe YouTube zvaunoda futi. ZveYouTube, zvido uye maonero anova akakosha zvakanyanya. Kuva nezvakawanda zvaunofarira kupfuura zvausingade uye kuyerera kwakatsiga kwevanyori vatsva ndizvo zvese zvaunoda kuti ukure chiteshi chako paYouTube.
Iwe unogona zvakare kuvimba neSoNuker kuti ikubatsire kudzidza mashandisiro ekushandisa sevhisi yedu kuti uve nani kupisa kubudirira kwako. Chengetedza kumhanya kwekukura kwechiteshi chako uye uve mukurumbira YouTuber nerubatsiro rwevanyori vemahara. Unogona zvakare kurega kushandisa masevhisi edu chero nguva iwe paunonzwa kuti hauchadi izvo, kana kuzvishandisa kukwidziridza mamwe mavhidhiyo kana zvidimbu zvemukati.
Kunyangwe paine zvakawanda zvikanganiso zvaunogona kuita kana uchitsvaga vanyoreri veYouTube, kushandisa chenjedzo kune hutano kunogona kukubatsira kuti uzvidzivise. Kubva pakusarudza chaiko chikuva, seSoNuker, kukupa iwe nevanyori veYouTube, kuziva nzira yekuwedzera manhamba ekuwedzera kubudirira kwako. Kutanga kuvaka iyo nzira kune ako YouTube zviroto neSoNuker nhasi.
A Pfupiso YouTube Marketing Guide
Iyo domain yesocial media ine vatambi vazhinji - Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, uye kunyange Reddit kudoma vashoma. Pane kudaro,...
Maitiro Ekuita Iyo Yakanyanya YeYouTube's VR Feature Kuti Uwane Vazhinji Vateveri
VR, kana Virtual Reality, inyanzvi yetekinoroji inopa vataridzi maonero ekutanga echiito. Virtual chaiyo haina kuganhurirwa kune yakakwirira-magumo ...
Mazano eKuwana Vazhinji Vanyoreri veYouTube kuti vakupe iwe "Super Thanks"
Musi wa21 Chikunguru 2021, YouTube yakabuda nechinhu chitsva chakapa vanogadzira zvemukati imwe nzira yekuita mari paYouTube. The...
Shandisa fomu yekukurumidza kuraira pazasi
Imwe-yenguva yekutenga sarudzo isina kunyoreswa kana kubhadhara kunodzokororwa.
YouTube Watch Maawa
sevhisi 50 YouTube Vanyoresa ($ 20) 100 YouTube Vanyoresa ($ 30) 300 YouTube Vanyoresa ($ 45) 500 YouTube Vanyoresa ($ 60)
Kuendesa SPEED: 10-100 vanyori pazuva
sevhisi 1000 YouTube Views ($ 20) 5000 YouTube Views ($ 60) 10000 YouTube Views ($ 100) 25000 YouTube Views ($ 200) 50000 YouTube Views ($ 350) 100000 YouTube Views ($ 600)
sevhisi 100 YouTube Inofarira ($ 13.50) 200 YouTube Inofarira ($ 20) 300 YouTube Inofarira ($ 25) 600 YouTube Inofarira ($ 40) 1200 YouTube Inofarira ($ 70) 2500 YouTube Inofarira ($ 140) 5000 YouTube Inofarira ($ 270) 10000 YouTube Inofarira ($ 530) 15000 YouTube Inofarira ($ 790) 20000 YouTube Inofarira ($ 1050) 30000 YouTube Inofarira ($ 1550)
Wedzera ngoro Wedzera ngoro Wedzera ngoro Wedzera ngoro Wedzera ngoro Wedzera ngoro Wedzera ngoro Wedzera ngoro Wedzera ngoro Wedzera ngoro Wedzera ngoro
sevhisi 10 Custom YouTube Comments ($ 20) 20 Custom YouTube Comments ($ 35) 30 Custom YouTube Comments ($ 50) 50 Custom YouTube Comments ($ 80) 100 Custom YouTube Comments ($ 140)
sevhisi 500 YouTube Watch Hours ($ 180) 1000 YouTube Watch Hours ($ 300) 2000 YouTube Watch Hours ($ 450) 3000 YouTube Watch Hours ($ 550)
sevhisi 500 YouTube Inowirirana ($ 30) 1000 YouTube Inowirirana ($ 50) 2000 YouTube Inowirirana ($ 80) 5000 YouTube Inowirirana ($ 130) 10000 YouTube Inowirirana ($ 250)
Joinha 500,000+ nhengo dzatove kushandisa SoNuker kuwana mahara YouTube vanyoreri uye vhidhiyo kufarira nhasi!
Wana Mahara YouTube Vanyoreri
Wana Mahara YouTube Anofarira
SoNuker inopa huwandu hwakawanda hwemasocial media kushambadzira masevhisi uye netiweki yekutengesa yekuwana mahara YouTube vanyoreri uye yemahara YouTube kufarira.
USA & UNOGONA: USA & UNOGONA: 888-881-9070
Maitiro ekukurudzira Vako Vanyoreri veYouTube kuti vagare neMavhidhiyo Marefu
Mazano Anopisa ekugadzira Vhidhiyo Anokurudzira Mamwe Maonero eYouTube & Sevha